Zoma 06 Septambra 2019. – FJKM
Zoma 06 Septambra 2019.
Fandalinana ny Boky 2 KORINTIANA
2 Korintiana 2.1-17
Tena mpanompon’ Andriamanitra marina tokoa ve ianao? Manana toetra miavaka mantsy izany araka an’i Paoly:
1-Tena tia fa tsy mihatsaravelatsihy
Hoy i Paoly : »fa tamin’ny haben’ny fahoriana sy ny alahelon’ny foko no nanoratako taminareo tamin’ny ranomaso be , tsy ny hampalahelovana anareo , fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra » (2.4). Manana izany ve isika mpanompon’ Andriamanitra? Jereo i Jesoa (Jao 1.11).
2-Mamela heloka ny diso (and 5-11)
Zava-dehibe amin’ny maha-kristiana araka ny fampianaran’i Paoly ny famelankeloka ny hafa izay diso . Fampianarana noraisin’i Paoly avy amin’i Jesoa izany satria i Jesoa no nampianatra momba ny famelankeloka ao amin’ny vavaka nampianariny (Mat 6.12). ary raha handeha hivavaka amin’ Andriamanitra isika dia nasainy mandeha mamela izay manana ady amintsika aloha (Mat 5.23-25). Ianaro ny mamela heloka , jereo i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana (Lio 23.24).
3-Hanitr’i Kristy isika
Mizara fitahiana no dikan’izany . Fiainana ho an’izay hovonjena fa ozona sy fahafatesana kosa ho an’ny tsy mino (and14-17). Ao amin’i Kristy ny fandresen’ny mpanompon’ Andriamanitra . »Fa isaorana anie Andriamanitra , izay mitondra anay mandrakariva ao amin’i Kristy toy ny fanaon’izay avy nandresy , ka dia ampisehoany ny hanitry ny fahalalana Azy eny tontolo eny izahay « (2.14).
Alahady 09 Aogositra 2020
Sabotsy 08 Aogositra 2020
Zoma 07 Aogositra 2020
Alakamisy 06 Aogositra 2020.